Ogaden News Agency (ONA) – Afhayeenkii Kooxda Daacish-ta Afghanistan oo La Dilay.
Afhayeenkii Kooxda Daacish-ta Afghanistan oo La Dilay.
Posted by ONA Admin	/ December 29, 2018
Dowladda Mareykanka ayaa ku warramaysa inay horumar ka sameysay dadaallada ay kula dagaalamayso kooxda Daacish ee Afghanistan, ayada oo xaqiijisay in afhayeenkii kooxdaas lagu dilay duqeyn uu Mareykanku fuliyey.
Sarkaal milatari oo Mareykan ah ayaa khamiistii sheegay in Sultan Aziz Azam axaddii lagu dilay gobolka Nangarhar. Sarkaal kale oo ka tirsan Daacish ayaa sidoo kale lagu dilay duqaynta.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa goor sii horeysay u sheegay saxaafada in Azam iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa la dilay. Afhayeenka ayaa sheegay in Azam uu mas’uul ka ahaa in uu kooxda Daacish u qoro dagaalyahannada fuliya weerarada miisaanka culus ee ka dhanka ah shacabka.
Warka ku saabsan dilka Azam ayaa yimid ayada oo warbixin uu soo saaray Pentagon-ka Maraykanku lagu sheegay in Daacish ay gobolka Nangarhar kala kulmeen khasaare nafeed, mid hoggaan iyo mid dhuleed intuba iskugu jira.